मृत्यु शैय्यामा पुगिसकेको ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ | Nepal Polity
अहिलेको नाकाबन्दीले यो मुलुकका जनतामा मौसमी राष्ट्रवादको पुनर्जागरण गरेको छ । गजव के छ भने २०४५ को नाकाबन्दी गुलियो लाग्नेहरुलाई अहिलेको नाकाबन्दी तीतो लागेको छ ।
द्वापर युग अन्त्य तिरको महाभारत युद्धका कारणहरु मध्ये हस्तिनापुर नरेश धृर्तराष्ट्रको आफ्ना छोरा दुर्योधनको हठ पूरा गर्ने लाचारी प्रमुख थियो । महाभारत युद्धको खेलमा यदुवंशीहरुको सर्वनाश गर्न कृष्णको अभीष्ट, अदृश्य भूमिका र गान्धार नरेश शकूनीको हस्तिनापुरलाई बर्बाद गर्ने बदलाको खेल पनि कारक थियो । हस्तिनापुर राज्य प्रति वफादार राजगुरु, भीष्म पितामह आदिले नूनको सोझो गर्नुपर्ने धर्मका कारण दुर्योधनको अन्याय, अत्याचारलाई प्रतिरोध गरेर निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् ।
राज्यको आधिपत्यबाट षडयन्त्रपूर्वक बञ्चित गरिएका पाण्डवहरुले पाँच गाउँ भएको इन्द्रप्रश्थ माग गर्दा पनि नपाए पछि पाण्डव र कौरबहरुको युद्ध अनिवार्य बन्यो । भगवत गीता र महाभारत युद्धले आधुनिक राजनीतिका लागि पनि सम्पूर्ण रहश्यहरु सिकाएको छ भनिन्छ । आधुनिक राजनीतिज्ञ सबैले गीता पढुन् भन्ने पनि होइन । तर इतिहास नसुनेको वा राजनीतिमा कूटनीति झिकेको सन्ठ निति र दृष्टिहीनले देश चलाउँछ भने त्यो देश निश्चित रूपले दूर्घटनामा पर्छ, जसरी शिकारु सवारी चालकले साधनलाई भीरबाट खसाल्छ ।
ठीक हस्तिनापुरको मोडमा आज यो देश छ । २७१ बर्ष अघि आधुनिक नेपालको एकीकरण शुरु गर्ने महानायक पृथ्वीनारायण शाहको कूटनीति आधुनिक नेपाली नेताहरुलाई ‘प्रतिगामी’ लाग्यो । ‘टीस्टा देखि सतलजसम्म’ को विशाल नेपाल तत्कालीन शासकहरुको विवेकहीनताले २०० बर्ष अघि खुम्चिएको होइन र ?
हामी नेपाली जनता राजनितिक दलका स्थाई दास हौ ।
अपवादलाई छोडेर २००७ सालदेखि यताका राजा, नेता सत्ता माग्न कुन तीर्थ स्थल गए भन्ने कुरा कस्लाई थाहा छैन ? कसको मध्यस्थतामा नेपाली राजनीतिका पात्र-कूपात्रहरु सत्तासीन भए, कसरी र कसको भूमिकामा नेपाली देशभक्तहरु मारिनु पर्यो, कसरी कस्ले यो मुलुकका प्राकृतिक स्रोतहरुलाई पराइलाई बुझाए ? भन्ने इतिहास ताजा छ ।
शासकहरुमा बुद्धि, विवेक र न्यूनतम गुण भएन भने त्यसको असिमित मूल्य मुलुकले चुकाउनु पर्नेरहेछ र भोट दिने जनता फुर्सदमा पछुताउनु बाहेक अर्को बिकल्प नहुने रहेछ । पञ्चायतलाई कालरात्री भनियो । आज जनता जिउँदै जलाउने, एम्बुलेन्सबाट थुतेर मार्ने, हाटबजारको भीड़मा गोली हान्ने, किनेर भोक मेटन नपाइने, काम गरेर खान्छु भन्न नपाइने, औषधि नपाएर आफन्त गुमाउनु पर्ने र जातीय / क्षेत्रीय युद्ध-सरदारहरुले देश नै बन्धक बनाएर बिखण्डनमा होम्ने यो कुन चाँही ‘स्वेतरात्री’ रहेछ ?
नेपालको अहिलेको हालत यही हो । २०५१ मा बहुमतको आफ्नै सरकार ढ़ाल्ने र बहुमत हुँदाहुँदै संसद विघटन गर्ने कांग्रेसको मति ठीक थियो ? पञ्चायतले खड़ा गरेका उद्योग धरोहरहरुमा कार्यकर्ता भरेर तन्नम् गराएपछि कौड़ीको मोलमा व्यापारीलाई बेचेर देशलाई परनिर्भरताको दुश्चक्रमा हाल्ने को हो ? चुनावमा बहुमत नल्याउने र बहुमतको सरकार ढाल्न कर्मचारी आन्दोलन गराउने, अरुण तेश्रो जलबिद्युत आयोजना असफल बनाउने, महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात नदेख्ने एमाले निति ठीक थियो ? चुनाबमा मत ल्याएर बहुमतले शासन गर्ने प्रजातान्त्रिक प्रणाली बिरुद्ध हतियार उठाउने माओबादी युद्धले गरेको असिमित धन-जनको नोक्सानी जायज मान्न सकिन्छ ? हामीले कुनै राजनीतिज्ञ वा भोट माग्न आउने दललाई प्रश्न सोध्ने आँट गरेनौ, किनभने हामी नेपाली जनता राजनितिक दलका स्थाई दास हौँ । सामन्ती, केन्द्रीकृत शासनबाट शासित भैरहने र ईमानदारीपूर्वक कर तिरेर देश डुबाउनेहरुका कर्तूत माफ गरिरहने हाम्रो सनातनी संस्कृति हो ।
सामन्ती, केन्द्रीकृत शासनबाट शासित भैरहने र ईमानदारीपूर्वक कर तिरेर देश डुबाउनेहरुका कर्तूत माफ़ गरिरहने हाम्रो सनातनी संस्कृति हो ।
अहिलेको नाकाबन्दीले यो मुलुकका जनतामा मौसमी राष्ट्रवादको पुनर्जागरण गरेको छ । गजव के छ भने २०४५ को नाकाबन्दी गुलियो लाग्नेहरुलाई अहिलेको नाकाबन्दी तीतो लागेको छ / जनता भोकै मर्दा, जिउँदै जलाइँदा र देश डूब्नै लाग्दा पनि नेपाली मोडेलको कथित लोकतन्त्र र संघीय गणतन्त्र धृर्तराष्ट्रहरुलाई फलिफाप भएको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीले जर्जर यो मुलुकमा कहिँ नभएको दुनिया हसाँउने छ जना उपप्रधानमंत्री, देख्नेलाई भन्दा … लाई लाज होइन त ?
फरक के छ भने यो सत्ता प्रति दिल्लीको अरुचि र जनताको बितृष्णा भए पनि भारतको अर्घेलोको कार्पेट मुनि परेको छ र पहिलेका भन्दा राष्ट्रवादी ठानिएको छ । यो बिजुली गएको अन्धकारमा तेल सकिन लागेको टूकी मात्र हो, जुन सकिएपछि अन्धकार अरु चुकिलो हुनेछ । वामपन्थीहरु दलाल हुँदैनन् भन्ने जस्तो भ्रम दुनियामा केही छैन, किनभने अघिल्लो उग्र बामपन्थी सरकारमा दिल्लीले आजसम्मको एक नंबर इमान्दार दलाल पाएको थियो भनिन्थ्यो ।
बुझ्नेका लागि, अल्पमतले बन्धक बनाउने र देश नै डूबाउने कथित यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिने यो भाँडतन्त्रले अल्पायूमै मृत्यूवरण गर्ने देखिँदैछ ।
धृर्तराष्ट्रहरु, आफू सत्ता लिन दिल्ली जाँदा ठीक मान्छन्, अर्को जाँदा बेठीक ! १२ बुँदे दिल्लीमा गर्नु ठीक थियो भने हालै प्रस्तावित ११ बुँदे डिजाइनको अन्तिम निर्णयकालागि दिल्ली जानुलाई कसरी बेठीक मान्ने ? कठपुतलीहरु जसरी अरुले चलाउँछ, त्यसरी चल्ने न हो ! तर नेपाली धृर्तराष्ट्रहरुले सिक्किमको इतिहास पढेका छैनन् जस्तो छ । सिक्किमलाई भारतमा बुझाएपछि लेन्डूप दोर्जेले दिल्लीतिर गुमनाम मृत्यूवरण गरे, जसरी ९० को भूकम्पमा भारदारबाट चन्दा उठाएर जनताको ऋण मिनाहा गर्ने जुद्द शमशेर भाइ-भारदार कै षडयन्त्रबाट दिक्क भएर शासन सत्ता नै छाडी पाल्पाको अर्गलीमा बैराग्य जीविकामा गएका थिए । बुझ्नेका लागि, अल्पमतले बन्धक बनाउने र देश नै डूबाउने कथित यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिने यो भाँडतन्त्रले अल्पायूमै मृत्यूवरण गर्ने देखिँदैछ । होइन भने यी धृर्तराष्ट्रहरुको नियति जुद्ध शमसेर, लेन्डूपहरु जस्तै गुमनामी नै हुने छ ।
आगे प्रभुको मर्जी !
1304 Total Views2Views Today
This entry was posted in China, India and tagged Baburam, Dhristarastra, India in Neopal, Lendup Dorje, Nepal constitution, Nepal Politics, Pandav by Nepalpolity. Bookmark the permalink.
अब दलहरूले के गर्लान् ?
Indigenous Peace Discourse in Nepal
Nepal New Constitution isaFailure
Archives Select Month February 2018 (8) January 2018 (4) September 2017 (4) September 2016 (3) August 2016 (2) July 2016 (2) June 2016 (2) May 2016 (5) April 2016 (2) March 2016 (2) January 2016 (1) December 2015 (8) November 2015 (3) October 2015 (1) September 2015 (6) August 2015 (8) July 2015 (11) June 2015 (8) May 2015 (3) April 2015 (6) March 2015 (22) February 2015 (22) January 2015 (64) December 2014 (120) November 2014 (150) October 2014 (53) September 2014 (53) August 2014 (4) July 2014 (10) June 2014 (3) November 2013 (2) October 2013 (8) September 2013 (3) April 2013 (29) March 2013 (20) December 2012 (6) October 2012 (3) September 2012 (16) August 2012 (64) July 2012 (70) June 2012 (87) May 2012 (15) April 2012 (10) March 2012 (8) February 2012 (3) January 2012 (49) December 2011 (29) November 2011 (15) October 2011 (9) September 2011 (3) August 2011 (1) July 2011 (1) June 2011 (2) May 2011 (3) April 2011 (5) March 2011 (8) February 2011 (10) January 2011 (5) December 2010 (2) September 2010 (6) August 2010 (1) July 2010 (2) June 2010 (3) May 2010 (6) April 2010 (4) March 2010 (3) February 2010 (3) January 2010 (5) December 2009 (7) November 2009 (6) October 2009 (1) March 2009 (6) February 2009 (2)